တရုတ် 150t / 24h ပြောင်းဂျုံစက်ရုံစက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Hongdefa
5t / 24h ပြောင်းဂျုံစက်ရုံစက်
10t / 24h ပြောင်းဂျုံစက်ရုံစက်
20t / 24h ပြောင်းဂျုံစက်ရုံစက်
30t / 24h ပြောင်းဂျုံစက်ရုံစက်
50t / 24h ပြောင်းဂျုံစက်ရုံစက်
100t / 24h ပြောင်းဂျုံစက်ရုံစက်
150t / 24h ပြောင်းဂျုံစက်ရုံစက်
250t / 24h ပြောင်းဂျုံစက်ရုံစက်
500t / 24h ပြောင်းဂျုံစက်ရုံစက်
40t / 24h ဂျုံဂျုံစက်ရုံစက်
60t / 24h ဂျုံဂျုံစက်ရုံစက်
80t / 24h ဂျုံဂျုံစက်ရုံစက်
100t / 24h ဂျုံဂျုံစက်ရုံစက်
120 / 24h ဂျုံဂျုံစက်ရုံစက်
150t / 24h ဂျုံဂျုံစက်ရုံစက်
200t / 24h ဂျုံဂျုံစက်ရုံစက်
300t / 24h ဂျုံဂျုံစက်ရုံစက်
500t / 24h ဂျုံဂျုံစက်ရုံစက်
Shijiazhuang hongdefa စက်ယန္တရားမုန့်ညက်ကြိတ်စက်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်
သငျသညျစက်မှုဇုန် processing maize မှပြောင်းဖူး၏လျှောက်လွှာကိုသိသလား?
သငျသညျတန်ဇန်းနီးယားမှာရှိတဲ့ပြောင်းဖူးကြိတ်စက်ရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ထိပ်တန်း3အကြောင်းပြချက်?
ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး မုန့်ညက် Maize
ကျွန်တော်တို့အီးမေးလ်ပို့ပါ Download as PDF
အစိုဓာတ်ကိုအကြောင်းအရာ (ကုန်ကြမ်းစပါးကိုသိုလှောင်မှုအတွက်အမျိုးသားရေးစံနှုန်းတွေနဲ့အညီကုန်ကြမ်းပြောင်းဖူးပေါ်အခြေခံပြီး) ≤13.5-14.5%
ပြောင်းဖူး grinder စက် 1. Turnkey စီမံကိန်းကို။
ဒါဟာစီးပွားရေးအရပြောင်းဖူးမုန့်ညက်ကြိတ်အပြောင်းအလဲနဲ့စက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါဟာလေး-ခြေလှမ်းတို့ပါဝင်သည်: cleaning--maize degerminating--milling--maize meal packing
1. သန့်ရှင်းရေးစနစ်က: အပြောင်းဝယ်ယူအခါ, ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါပြောင်းဖူးအာဖရိကနိုင်ငံများအတွက်အလွန်ညစ်ပတ်သည်။ ကျနော်တို့ကပြောင်းဖူးသန့်ရှင်းရေးမှပြောင်းဖူးစည် sifter / ပြောင်းဖူးသန့်စင် / ပြောင်းဖူး destoner စသည်တို့စက်တွေကိုသုံးပါကဒီရှိသညျအတိုငျးကျောက်သံ, ကြိုး, ပလပ်စတစ်စသည်တို့ကိုဒီတော့တူသောဒီတော့အပြောင်းအလဲနဲ့မတိုင်မီ first.In သည့်ပြောင်းဖူးသန့်ရှင်းရေးဖို့လိုအပ်ညစ်ညူးအများအပြားမျိုးရှိ၏။
2. Degerminating စနစ်က: 2-10 နာရီများအတွက်ပြောင်းဖူးသန့်ရှင်းရေးပြီးနောက် degerminating မှီ, ပထမဦးဆုံးအစိုဓာတ်အတွက်ပြောင်းဖူးလိုအပ်ပါတယ်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုဘင်အတွက်ပြောင်းဖူးအိပ်ပျော်ခြင်းစေကွဲပြားခြားနားသောတောင်းဆိုချက်ကိုအရသိရသည်ထို့နောက်ပြောင်းဖူး degerminator ကိုသွား, အ degerminator အဆိုပါပွတ်တိုက်နိုင်ပါတယ် ပြောင်းဖူး kernel ကိုကနေပြောင်းဖူးအသားအရေကျိုးပဲ့အပိုင်းအစများ၏အရွယ်အစားနိမ့်ဆုံးလျှော့ချရေးနှင့်အတူ၎င်း၏လိုင်ကနေပိုးဖယ်ရှားရန်။
3. Mills စနစ်က: ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်များ၏ဖြစ်စဉ်ကို သုံးအခြေခံခွဲများလုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်သည်။ ပထမဦးစွာကိုယ်ထိလက်ရောက်တတ်နိုင်သမျှနည်းနည်း dilution သို့မဟုတ်ရောစပ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေပြောင်းဖူး kernel ကို၏သုံးအစိတ်အပိုင်းများ detaches ။ ဒုတိယအချက်မှာအမြိုးမြိုးနဲ့တိကျတဲ့အုပ်စုများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်, အရွယ်အစားသို့ detach လုပ်လိုက်သောအမှုန် classifies နှင့်လိုအပ်သောအသေးစိတ်ဖို့အမှုန်လျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါသုံးအစိတ်အပိုင်းများထို့နောက်လိုအပ်ချောထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. အဖြစ်လိုအပ်သော recombined နေကြသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖြစ်လျှင်, endosperm သို့မဟုတ်ဖွဲနု / ပိုးထည်ဖြစ်စေ၏နိမ့်ဆုံးပြိုကွဲနှင့်အတူပြောင်းဖူးစေ့ကနေဖွဲနုနှင့်ပိုး detach ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကြယ်သော endosperm ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်း samp ၏အတော်လေးကြီးမားတဲ့အပိုင်းပိုင်းအနေဖြင့်အလွန်ကောင်းသောပြောင်းဖူးမုန့်ညက်အထိကွဲပြားခြားနားသောအသေးစိတ်မှု၏ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းရန်အရွယ်အစားလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
4. Pack စနစ်က: ပြောင်းမုန့်ညက်ထုပ်ပိုးစက် 1kg / 2kg / 5kg / 10kg / 25kg / 50kg လိုပဲအိတ်၏ကွဲပြားခြားနားသောကြင်နာတွေနဲ့ထုပ်ပိုးနိုင်ပါတယ်။
ယခင်: 50t / 24h ပြောင်းဂျုံစက်ရုံစက်
နောက်တစ်ခု: 300t / 24h ဂျုံဂျုံစက်ရုံစက်
ပြောင်းဖူးဂျုံ Mills က
အတွေ့အကြုံ 37 နှစ်နှင့်အတူနေတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်ကျနော်တို့ခက်ခဲအလုပ်လုပ်မည်မုန့်ညက်ကြိတ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအပြည့်အဝအကွာအဝေးအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေး။
Wumashan စက်မှုဇုန်အပိုင်း Zanhuang, Shijiazhuang, Hebei, တရုတ်
Electric Maize Mill, Flour Mills, ပြောင်းဖူးဂျုံစက်ရုံစက်များ, Flour Milling Machine, Maize Grits Making Machine, Flour Processing Line,